U garaac gundhig-dhamaadka-u-diritaanka fiidiyahaaga | Waxaan ka socdaa mac
U wac galka-dhamaadka-si-dhamaadka encryption in aad video
Waxay umuuqataa in amaanka fiidiyowyada qulqulka ah ee shirkada caanka ah ee Ring ay wanaajinayso iyadoo lagu darayo encryption-ilaa-dhamaadka, sidoo kale loo yaqaan "dhamaadka-ilaa-dhamaadka". Sidan oo kale, qaar ka mid ah kaamirooyinka amniga ee shirkadda ay leedahay Amazon waxay yeelan doonaan ammaan lagu daray.
Noocan sirta ah ayaa horeyba ugu firfircoonaa fiidiyowyada ku keydsan daruurta Ring oo ay iska cadahay inay leeyihiin isticmaaleyaasha, laakiin hadda sidoo kale kudar sirtaan dhowr kamaradood.
Shirkadda ay si fiican u yaqaanaan adeegsadayaasha kamaradaha noocan ah iyo walxaha amniga guriga, ayaa sii wadaya ka shaqeynta hirgelinta tallaabooyinka ugu wanaagsan ee ilaalinta isla markaana hadda waxay kordhineysaa amniga ikhtiyaarkan aan haysanno waxaa laga heli karaa barnaamijka App-ka u gaarka ah. Kaamirooyinka leh ikhtiyaarkan la heli karo waa:
Riix Video Doorbell Pro
Garaac Video Doorbell Elite
Wicitaanka Tooska ah Cam Wired
Ku Xidh Cam Ku Xidhka Gudaha
Ku dhaji Cam Elite
Dhaqdhaqaaqa waa mid fudud oo isticmaaluhu wuxuu ka sameyn karaa qalab kasta oo iOS ama Android ah, had iyo jeer barnaamijka. Tan awgeed waa inaad raac talaabooyinkan:
Xullo xulashada sirta fiidiyowga oo guji dejinta horumarsan
Daar encryption-ka-dhamaadka-dhamaadka fiidiyow oo bilow
Waxaan raacnaa tilmaamaha shaashadda si aan ugu diiwaangelino sidii isticmaaleyaasha rootiga Dhammaadka-dhammaadka Video Encryption oo aan u sameysano erey sir ah
Sidan oo kale, waxaan kaliya ku qasbanaan doonnaa inaan ku darno kaamirooyinka Dhawaaqa oo aan ku dhammeyno hawsha tallaabooyinka lagu muujiyey shaashadda. Hadda waxaan yeelan doonnaa Waxaan daaraa encryption-ka-dhamaadka dhamaadka kamaradahayaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » Gargaarka » U wac galka-dhamaadka-si-dhamaadka encryption in aad video